Voanemba - Wikipedia
Ny voanemba dia zavamaniry maniry isan-taona izay afaka maniry amin' ny tany fasehana sy tsy ampy rotsak' orana, ka anisan' ny voly manan-danja any amin' ny faritra vitsy orana manerana an' i Afrika sy Azia. Ao amin' ny karazan-javamaniry Vigna izy ary Vigna sinensis na Vigna unguiculata ny anarany ara-tsiansa. Vitsy dia vitsy ny zavatra ilainy amin' ny fitsiriany sy ny famokarany voa, satria ny fakany dia afaka maka ny azôta avy amin' ny atmôsfera, ka mahatonga azy io ho voly sarobidy ho an' ny tantsaha mahantra loharanon-karena ary mety tsara ampifandimbiasina amin' ny voly hafa. Atao vilona ho an' ny biby fiompy ny taho sy ny ravim-boanemba. Ny voanemba dia mety maniry mitsangana na mitsangana somary mandady na mandady miakarta. Ny voany izay be prôteinina no antony tena ambolena azy, ary azo hanina ihany koa ny raviny sy ny voany tsy matoy.
Ny voanemba dia nofolahina novolena voalohany tany Afrika ary iray amin' ireo voly tranainy indrindra. Nisy hetsika famolahana faharoa angamba tany Azia, talohan' ny nielezan' io zavamaniry io tany Eorôpa sy Amerika. Mazàna ny voany no masaka dia atao lasopy, na nototoina ho lasa lafarinina na feta.
Ny ankamaroan' ny voanemba dia maniry any amin' ny Kôntinenta Afrikana, indrindra any Nizeria sy Nizera, izay mahatratra 66 %n' ny famokarana azy eran-tany. Ny vinavina tamin' ny taona 1997 dia milaza fa ny voanemba dia ambolena amin' ny tany 12,5 tapitrisa hektara, izay ahazoana vokatra 3 tapitrisa taonina maneran-tany ary nanin' ny olona miisa 200 tapitrisa isan' andro. Ny fiparitahan' ny bibikely dia sakana lehibe amin' ny famokarana voanemba, izay indraindray miteraka fahaverezan' ny vokatra mihoatra ny 90 %.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Voanemba&oldid=1042637"
Voaova farany tamin'ny 30 Desambra 2021 amin'ny 11:45 ity pejy ity.